Published June 8, 2020 at 9:15 PM CDT
Iowa ayaa ka warbixineysay afar kale oo COVID-19 ah tan iyo markii ay dowladdu shalay ahayd, taasoo ka dhigeysa gobolka Iowa guud ahaan 606. Iowa waxaa jira 21,919 kiis oo la xaqiijiyay oo ah COVID-19, Iowa. Taasi waa koror 330 ah ilaa shalay.
Gobolka Iowa ayaa ku dhawaaqay maanta in shan goobood oo dheeraad ah oo Iowa la furi doono usbuucan, oo ay ku jiraan rugaha Carroll iyo Denison ee Waqooyi-galbeed Iowa. Shakhsiyaadka waa inay ku buuxiyaan qiimeynta barta shabakadatestiowa.com isla markaana waqti u sameystaan balan si toos ah looga tijaabiyo, sida lagu sheegay sii deynta.
Maamulka Gaadiidka Mareykanka ee Gawaarida Gaadiidka ayaa maanta shaaciyay abaalmarin gaareysa $ 4.8 milyan oo lagu bixinayo Transit-ka Magaalada Sioux.
Waa qayb ka mid ah Sharciga Masruufka, kaas oo gargaar siiya dowladda, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee ay waxyeelladu ka soo gaartay cudurka faafa ee coronavirus.
Deeqda ayaa taageeri doonta adeegga basaska ee Sioux City Transit, oo ay ku jiraan kharashyada hawlgalka, qalabka ilaalinta shaqsiyadeed ee shaqaalaha, alaabada nadiifinta iyo dayactirka kahortagga.
Xarunta 'WinnaVegas Casino Resort ayaa ku dhawaaqday inay dib u furanayso oo ay dib u bilaabi doonto hawlgallada khamaarka 50% awoodda, laga bilaabo 10 subaxnimo Jimcaha.
Nidaamka dib u furitaanka waxaa lagu sameyn doonaa wejiyada leh mashiinno la xulay iyo adeegyo kale oo ku harsan wejiga koowaad. Waqtiga u dhexeeya wejiyada waxay kuxirantahay sida wanaagsan ee martida u adeecaan tilmaamaha amaanka iyo qawaaniinta ay dejiyeen maamulka khamaarka.
Laybareeriyada Dadweynaha ee Magaalada Sioux waxay bilaabayaan qorshe wajiga ka mid ah oo dib loogu furay goobahooda. Tallaabada ugu horreysa waa hal toddobaad oo laga maqlayo, iyada oo lagusoo qaadanayo xirmo aan xirneyn oo ku taal Maktabadda Lugood ee Perry Creek laga bilaabo Juun 15-keeda.
Isticmaalayaasha maktabadda waxay mar kale awood u yeelan doonaan inay dhigaan ashyaa'da kaydiyaha kaydka ah iyo, ka dib markay shaqaaluhu buuxiyaan codsiyada qabashada, Maktabadda ayaa la soo xiriiri doonta si ay waqti ugu qabsadaan laanta Perry Creek Laanta. Ballamada ayaa la heli doonaa Isniinta ilaa Sabtida.
Dhamaan walxaha wareejinaya waxaa lagu meelaynayaa karantiil kahor baaritaankooda soo socda si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada awoowga. Buugga buuggu wuxuu ka dhacayaa dhammaan saddexda laamood ayaa xirnaanaya illaa laga gaaro hirarka bilowga ah ee shaqaalaha si shaqaalaha ay u maareeyaan qulqulka.
Local NewsLocalIowaSioux CityWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaSioux City Public LibrarynewsCOVID-19SomaliTestIowa